Sawirro: Turkiga oo gargaar caafimaad uu ku jiro qalabka Oksijiinka ugu deeqay DFS - Jowhar Somali Leader
Home Somali Sawirro: Turkiga oo gargaar caafimaad uu ku jiro qalabka Oksijiinka ugu deeqay...
Sawirro: Turkiga oo gargaar caafimaad uu ku jiro qalabka Oksijiinka ugu deeqay DFS
Wasiirrada caafimaadka, arrimaha dibadda iyo gargaarka ayaa si wadajir ah safiirka Turkiga ee Soomaaliya maanta uga guddoomaya qalab caafimaad oo dowladda Turkiga ay ugu deeqday dowladda Soomaaliya, si ay ugu adeegsato dagaalka loogu jiro xakameynta Faafitaanka COVID19.
Diyaarad siday gargaarkan oo aheyd diyaarad milateri kuwa caafimaadka ayaa saaka soo caga-dhigatay garoonka diyaradaha Muqdisho.
Gargaarka ay dowladda Turkigu soo gaarsiisay dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah qalabka Sheybaarka, qalabka lagu neefsado, Labiska shaqaalaha caafimaadka iyo qalab kale oo muhiim ah oo dhammaan xilligaan loo qabay baahi xooggan.
Wasiirrada ayaa dowladda Turkiga uga mahad celiyay taageerada iyo garab istaagga joogtada ah ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay la garab taaganyihiin, iyo gurmadka degdegga ah ee xilliyada xaaladaha adag ay soo cusboonaadaan.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa munaasabadda ka sheegay in diyaarado kale oo gargaar caafimaad sida ay maalamaha soo socda soo gaari doonaan magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ugu jirta kahor tagga iyo xakemynta cudurka halista badan ee COVID-19.